वैशाख २९, २०७७
लकडाउनले साहित्यिक गतिविधिमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सिकाइरहेको छ
लकडाउन सुरु भएको अर्को दिनदेखि कवि श्रवण मुकारुङ नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा कविता सुनाइरहेका छन् । लकडाउनअघि साहित्यिक जमघटमा भेटिने मुकारुङ यतिबेला दैनिक फेसबुकको भित्तामा भेटिन्छन्, त्यो पनि लाइभ । उनी हरेक दिन फरक–फरक कविका कविता पढेर सुनाउँछन् । सहभागी हुने कार्यक्रममा उपस्थित संख्याभन्दा धेरैले फेसबुकमा उनको भिडियो हेर्छन् ।
मुकारुङमात्र होइन यतिबेला थुप्रै साहित्यकार सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित भएका छन् । लकडाउनअघि साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहन्थे । सातामा दुईभन्दा धेरै त पुस्तक विमोचन हुन्थे । त्यसबाहेक सभा, गोष्ठी, छलफलहरू दैनिक हुन्थे । कहिले पुरस्कार वितरण त कहिले साहित्यिक यात्रामा साहित्यकारहरू देश–विदेश घुम्थे । तर, लकडाउनले उनीहरूको सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द भएको छ । यससँगै साहित्यिक गतिविधि पनि ठप्प छन् । तर, साहित्यकारलाई कोरोना कहरले घरको ढोकाभित्र थुनेरमात्र राखेको छैन । आफू थुनिएको कोठाबाट नै बउनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
साहित्यकार कृष्ण धरावासी नियमित रूपमा बिहान ९ बजेर ३० मिनेटमा फेसबुक लाइभ आउँछन् । लाइभमार्फत उनी कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, भूगोल र राजनीतिका कुरा गर्छन् । वैशाख १ गतेदेखि लाइभ आएका धरावासीले सुरुमा कोरोना सचेतना फैलाएका थिए । त्यसपछि राजनीति र समाजसँग अन्तरनिहित विषयमा बहस गरे । पूर्वीयतावादका विषयमा बोल्दै अबका दिनमा पूर्वीय भाषा, संस्कृति र दर्शनमा आधारित भएर साहित्य सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय उनले हरेक दिन फरक–फरक साहित्यिक विषयमा बहस गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘केही दिनदेखि काव्य विधाका विशेषता, कुनै खास लेखक र कृतिमाथि चर्चा गरिरहेको छु ।’ कोरोना कहरका कारण घरमै बस्न बाध्य भएका र मानसिक तनावमा परेकाहरूलाई लक्षित गरी आफूले फेसबुकमार्फत लाइभ सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै लेखक एवं समीक्षक महेश पौड्याल यतिबेला ३ प्रकारका गतिविधिमा सक्रिय छन् । आफैं फेसबुक लाइभमार्फत साहित्यिक बहस गर्ने, अन्यले आयोजना गरेको बहसमा सहभागी हुने र साहित्यमा रुचि भएका नयाँ युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूसँग संवाद गर्ने । पौड्यालले फेसबुक लाइभमार्फत पूर्वेली र पश्चिमी समाजको महामारी साहित्यप्रतिको सैद्धान्तिक धारणाका विषयमा गरेको बहसलाई धेरैले रुचाएका थिए । पौड्याल भन्छन्, ‘राम्रो साहित्य सिर्जना गर्ने युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ । तर, उनीहरूलाई बाटो देखाउने कोही छैनन् । स्थापित साहित्यकारले सहयोग र सम्बोधन गर्दैनन् । यतिबेला म उनीहरूकै आवाज सुनिरहेको छु र सक्दो सुझाव, सल्लाह तथा सहयोग पनि दिइरहेको छु ।’ उनी कथा लेखनमा सम्भावना बोकेका केही युवालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गाइड गरेर कृति तयार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
कतिपयले कवि मुकारुङजस्तै अरुका सिर्जनाहरू पस्किने काम पनि गरिरहेका छन् । यसमध्येका एक हुन्, लेखक नारायण वाग्ले । वाग्ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमार्फत दैनिक एउटा कविता पोस्ट गरिरहेका छन् । ध.च. गोतामेको कविता ‘आऊ वसन्त स्वागत छ’ पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘वसन्त आयो, वसन्त आयो भन्दै ध.च. गोतामेले उतिबेला यो यामको स्वागत गरे जब काठमाडौंमा कुहिरो, हुस्सू र तुवाँलो कहिल्यै रित्तिन्नथ्यो । जसरी बीउ, बुटा, बोट र बिरुवाहरू !’
कवि विप्लव ढकालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपाली छोटा कविता श्रृङ्खला’ चलाएका छन् । उनी एक श्रृङ्खलामा ५ कविका छोटा कविता पोस्ट गर्छन् । बुधबारसम्म उनले १५ श्रृङ्खला चलाइसकेका छन् । अर्थात, ७५ कविताहरू पोस्ट गरेका छन् । उनले छोटा कविताहरूको कलेक्सन निकाल्ने सोचेर ५ सयभन्दा बढी कविता जम्मा गरेको थिएँ । अहिले उनी त्यसमध्येबाटै छनोट गरेर कविताहरू पोस्ट गरिरहेका छन् । श्रृङ्खलाबारे ढकाल भन्छन्, ‘छोटा कविताहरू पनि रुचिकर र सुन्दर हुन्छन् । यसको राम्रो पक्ष अरूलाई पनि थाहा होस् र सबै पुस्ताका कवि र कवितालाई एक–अर्काले चिनुन् भन्ने उद्देश्यले यो श्रृङ्खला सञ्चालन गरेको हुँ ।’
लेखक कृष्णराज सर्वहारीले ‘क्वारेन्टाइनमा थारु कविता’ श्रृङ्खला चलाइरहेका छन् । उनले बुधबारसम्म ३० वटा थारु कविताहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त राम्रा कविका, राम्रा कविता राखेपछि उनीहरूलाई चिन्ने र फलो गर्नेहरू बढ्लान् भन्ने सोच हो । अर्को, कविता वाचन गर्न पुराना कविता खोज्दा आफूलाई पनि पढ्ने र भुल्ने बहाना हुन्छ भन्ने सोचेर फेसबुकमार्फत कविता वाचन सुरु गरेको हुँ ।’ प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार थारु साहित्यकारहरूको जमघटमा कार्यक्रम हुन्थ्यो । लकडाउनले त्यो स्थगित भयो । त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पनि आफूले कविता वाचन सुरु गरेको सर्वहारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, कथाकार एलबी क्षेत्री सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना र अन्य कविका कविताहरू पोस्ट गर्ने, आफूले पढेका पुस्तकबारे समीक्षा लेख्ने, राजनीतिक र समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्ने गरिरहेका छन् । कवि उषा शेरचन नियमितजसो आफ्ना कविता र मुक्तकहरू पोस्ट गरिरहेकी छन् । यसरी साहित्यकार, लेखक, कवि, गजलकारले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । आफूले कुनै श्रृङ्खला नचलाए विभिन्न समूह, संस्थाले गरिरहेका अन्तक्र्रियामा उनीहरूको सहभागिता देखिन्छ ।
विभिन्न एपको प्रयोग तथा फेसबुक लाइभमार्फत पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा धेरैजसो साहित्यकारले सहभागिता जनाइसकेका छन् । यसरी स्रष्टा र पाठकले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन नपाए पनि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न एपमार्फत साक्षात्कार गरिरहेका छन् । स्रष्टाका कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई कमेन्टमार्फत प्रश्न राख्नसमेत पाइने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढिरहेको छ । नेपालका लागि यो एउटा नयाँ ट्रेन्ड पनि हो । विदेशमा भने अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै हुँदै आएका थिए ।
पुस्तक प्रेमीहरूको फेसबुक समूह बुकाहोलिक्सले ‘लकडाउनमा स्रष्टासँग साक्षात्कार’ विषयक
साहित्यिक कार्यक्रम गरिरहेको छ । साक्षात्कारमा कुनै एक स्रष्टालाई निम्त्याएर आफ्नो लेखन यात्रा र कृतिबारे बोल्न लगाइन्छ । बुकाहोलिक्सले लकडाउनपछि २० जनाभन्दा बढी स्राष्टासँग साक्षात्कार गरिसकेको छ । विभिन्न कृतिबारे चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्न खोलिएको यो ग्रुपमा यतिबेला झन्डै १५ हजार सदस्य छन् । ‘दिनमा १ जना लेखकलाई निम्त्याएर हामीले उहाँको लेखन यात्रा र अनुभवहरू सुन्ने वातावरण बनाएका छौं । नयाँ लेखक र पाठक गरी दैनिक सय जनाको दरले सदस्यहरू बढिरहनुभएको छ । साक्षात्कारमा रेस्पोन्स पनि राम्रो छ’ ग्रुपकी एडमिन सगुना शाह भन्छिन्, ‘लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत साहित्यिक गतिविधि गरेर लेखक र पाठकबीचको दूरी घटाउन पाएकोमा हामी निकै खुसी छौं ।’ प्रस्तुतिलाई बुकाहोलिक्सको युट्युव च्यानलमा सुरक्षितसाथ संग्रहित गरेरसमेत राखिएको छ ।
काठमाडौंको सर्वनाम थिएटरमा हुने महफिल पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ भइरहेको छ । ‘सेतोपर्दा’मार्फत लाइभ आउने महफिल सातामा दुई पटक जुम एपमार्फत सञ्चालन गरिन्छ । यो कार्यक्रम गजलकार बाबु त्रिपाठीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । किताब यात्राले केही समयअघि ‘किताब जात्रा’ नामक फेसबुक पेजबाट ‘अर्चुअल लिटरेचर फेस्टिभल’ गरेको थियो । जसमा विभिन्न स्रष्टा तथा कलाकारको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, ज्योति श्रेष्ठको पहलमा ‘समय र सिर्जना’ श्रृङ्खलामार्फत स्रष्टासँग साक्षात्कार भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षात्कार उपनाम दिइएको उक्त कार्यक्रमको अहिले आठौं श्रृङ्खला चलिरहेको छ । त्यस्तै, गुन्द्रुक युट्युब च्यानलमा ‘मझेरी: द पोइट्री शो’ प्रतियोगिता चलिरहेको छ ।
यसबाहेक विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि स्रष्टासँग अनलाइन कुराकानी गरेर साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । लकडाउनको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट भइरहेका साहित्यिक गतिविधिले आगामी दिनमा नेपाली साहित्यमा पनि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । समीक्षक पौड्याल भन्छन्, ‘एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूको संख्याभन्दा धेरै संख्यामा सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन भएका साहित्यिक गतिविधिमा मानिसहरूको संलग्नता देखिएको छ । यो एउटा खुला प्लेटफर्म हो । लकडाउनले नेपाली साहित्यमा यसको आवश्यकता र महत्व सिकाएको छ ।’
कोरोनाले रोकेका नयाँ पुस्तक
लेखकहरू लेख्न भन्दा पढ्नमै व्यस्त